Lisa Jackson Nye John Gruber Ajụjụ Ọnụ maka Earthbọchị |wa | Esi m mac
Lisa Jackson Nye John Gruber Ajụjụ Ọnụ maka Earthbọchị Earthwa
Ikpeazụ Saturday na Daybọchị ụwa. Were oge ahụ, onye nta akụkọ John ikechukwu gbara Lisa Jackson ajụjụ ọnụ na Podcast a maara nke ọma. Na "Talk Show" ha kwuru maka okwu dị iche iche gbasara gburugburu: mmetụta zuru ụwa ọnụ nke mgbanwe ihu igwe na kpọmkwem banyere mbọ Apple gbara ichekwa gburugburu. Ruo ugbu a, mbọ ụlọ ọrụ ahụ lekwasịrị anya na ike ike akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. N'oge ikpeazụ, a na-elekwasị anya na mmemme maka mmezi nke Ngwuputa ebe ha weputara ihe ndi eji akpo ha.
A na-atụle ọnụ ọgụgụ ndị a n'ọgba carbon nke onye na-emepụta ihe hapụrụ. Jackson nyere aka na akara ụkwụ carbon nke Apple na 2016 bụ 29,5 nde tọn, ma ọ bụrụ na anyị gụọ ma Ngwuputa, njem nke ngwaahịa ahụ, na nkwakọ ngwaahịa na ọkụ eletrik dị mkpa iji mepụta ngwaahịa ahụ.
Dị ka Lisa Jackson si kwuo, atụmatụ Apple iji belata uru a abụghị ihe pụrụ iche. Onye ọ bụla na-emepụta ihe nwere usoro mmepụta yabụ ga-amụrụ otu ndị na-eweta ya otu atụmatụ a kapịrị ọnụ. Atụmatụ ọnyà agaghị adị irè 100%. Ndị na-eweta ọrụ ọhụrụ atọ abanyela na atụmatụ atụmatụ ike dị ọcha 100% n'afọ gara aga. Ọ na-arụ ọrụ ugbu a na ndị na-eweta 7 iji gbanwee 100% nke usoro mmepụta ya na ume ndụ.
N'ime izu gara aga, Apple emeela Earthbọchị withwa na ihe omume dị iche iche: inye onyinye nke ego ha nwetara na gburugburu ebe obibi site na mkpakọrịta na-enweghị uru. Ọ na-eburu ọrụ mmata nye ndị ahịa ya ka ha wee nwee ike ịmega mba ọzọ ma a ga-enye ha ozi pụrụ iche na ngwa iMessage.
N'iji oge ahụ, n'izu a ka o kpughere nke ya Nkwupụta Nkwupụta Gburugburu Ebe Obibi 2017. Ike ndị a bụ nlekọta nke ngwupụta na ihe owuwu ụlọ site na ihe ndị a na-emegharị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Lisa Jackson Nye John Gruber Ajụjụ Ọnụ maka Earthbọchị Earthwa
Tim Dashwood na plugins ya sonyere Apple